Adobe ayaa soo saartay codsi DMCA ah in meesha laga saaro Nalalka Nadiifka ah, mashruuc il furan oo sii waday taageerada Flash | Laga soo bilaabo Linux
Adobe waxay soo saartay codsi DMCA si meesha looga saaro Nalalka Nadiifka ah, oo ah mashruuc il furan oo sii waday taageerada Flash
Xulka wararka oo dhan | 04/10/2021 14:37 | La cusbooneysiiyay 14/10/2021 23:01 | Noticias
Dhammaanteen waan xusuusnaa in Adobe Flash Player uu gaaray dhammaadka noloshiisa waxtarka leh Diseembar 31, 2020, taas oo calaamad u noqotay dhammaadka tiknoolajigan oo ahaa dareen xilligaas. Iyo xitaa waxa Dhammaanteen waan rumaysan karnay inaanan waligeen ka ogaan doonin Tooshka, xaqiiqadu waa ka duwan tahay, maadaama uusan aad u dhiman, tan Flash weli waa laga heli karaa Shiinaha iyo ganacsiyada.
Tani waa sababta oo ah kooxda mashruuca "Nalal Nadiif ah" ayaa ka faa'iidaystay xaaladdan si ay u sii waddo samaynta software -ka dunida oo dhan. Waa dhankiisa ma uusan jeclayn Adobe taas oo keentay inuu soo saaro codsi DMCA si uu u codsado xidhitaanka mashruuca isha furan.
Xaqiiqdii, In kasta oo Adobe ay joojisay qaybinta noocyada cusub ee Flash, farsamada ayaa weli lagu taageeraa laba suuq: ganacsadaha iyo Shiinaha, iyada oo loo marayo Flash.cn. Si kastaba ha ahaatee, dhibaatadu waxay tahay in nuqul shaqeynaya oo Flash ah laga helo meel ka baxsan Shiinaha ama shirkadaha, kaas oo sidoo kale ammaan u ah cusboonaysiinta soo noqnoqda oo aan wax khatar ah ku keenayn mishiinnada isticmaalayaasha. Kooxda mashruuca Nalalka Nadiifinta ah ayaa tan ku dhammaystiray iyaga oo dejinaya rakibayaal iyada oo aan ku tiirsanayn adeegga nidaamka Flash Helper ee ay adeegsato Adobe si ay u curyaamiso nooc gaar ah oo Flash ah. Sidaa darteed, Adobe waxay soo saartay codsi DMCA si ay u codsato xidhitaanka mashruuca GitHub.
“Adobe waa milkiilaha xuquuqda daabacaadda waxaana la ii fasaxay inaan matalo. Barnaamijkeena Adobe Flash Player waa la jebiyey. Faylasha laga hadlayo waxay ka kooban yihiin waxyaabo xuquuqda daabacaadda leh oo ay leedahay Adobe Inc.
Dhiniciisa, Chrome wuxuu ciyaaray door muhiim ah dejinta isbeddellada horumarinta webka. Iyada oo loo marayo xayeysiis la xiriira nooca 55 ee biraawsarka Chrome, kaas oo Google ay ku xaqiijisay mowqifkeeda si aad u isticmaasho HTML5 si aad ugu beddesho Flash. Intaa waxaa dheer, maahan kan kaliya ee qeexaya booska Google. Dhab ahaantii, imtixaannadii ugu horreeyay ee ku saabsan guud -ahaanshaha HTML5 ee YouTube -ka waxay dib ugu noqonayaan toban sano.
Dhammaan aaladaha moobiilka ee Apple waxay la yimaadaan waxqabad aad u sarreeya, hirgelinta awoodda hoose ee heerarkan furan. HTML5, oo ah heerka webka cusub ee Apple qaadatay, wuxuu u saamaxayaa kuwa kale ee horumariya webka inay abuuraan garaafyo horumarsan, fonts, animations, iyo kala-guur, iyagoon ku tiirsanayn furaha dhinac saddexaad (sida Flash). HTML5 gabi ahaanba waa furan yahay waxaana gacanta ku haya guddi uu Apple xubin ka yahay. »
Luqadda Golaha WebAssembly, oo qeexitaankeedu Core uu dhowaan noqday heer webka, horumariyayaashu waxay leeyihiin ikhtiyaar dheeraad ah. Iyada oo la adeegsanayo WebAssembly waxaan filaynaa nabadgelyo iyo xawaare dheeri ah, laakiin waa inaad barataa C, C ++, Rust, Java ama C # si aad awood ugu yeelatid inaad ku socodsiiso koodhka shabakadda.
Marka laga hadlayo fursadaha la heli karo xilligan, weli waxaan haynaa ruffle, taas oo ah mid ka mid ah ikhtiyaarrada ay heli karaan dadka doonaya inay sii wadaan adeegsiga Flash, maadaama ay sidaas tahay Emulator Flash Player ku qoran Rust. Ruffle wuxuu si caadi ah ugu shaqeeyaa dhammaan nidaamyada hawlgalka casriga ah sida codsi keligiis ah iyo dhammaan daalacashada casriga ah isagoo adeegsanaya WebAssembly.
Tani waxay noqon doontaa beddel dheeraad ah oo la siiyo dhinacyada saddexaad ee doonaya inay sii wadaan adeegsiga Flash. Wixii su'aalo ah ee ku saabsan qaybaha Flash -ka ruqsad haysta iyo Adobe laga yaabo inaysan awoodin inay siidaayaan, Adobe waxay ka tagi kartaa qoraal ah qaybaha laga saari doono. Kuwaas ayaa markaa laga saari karaa ama lagu beddeli karaa ilo kale oo furan.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, furfurnaanta Adobe ee Flash ee bulshada horumariyaha waa muran. Dhinaca kale, qaar ayaa ku doodaya in tobanaan kun oo ciyaaro iyo warbaahinba ay ku tiirsan yihiin Flash, iyo in sababo taariikheed sidoo kale, adeegsiga isha furan ay tahay fikrad wanaagsan. Tani waa inay sidoo kale badbaadisaa saacado badan oo shaqo ah.
Kuwo kale waxay fikraddan u arkaan wax lagu qoslo iyagoo tixgelinaya inay tahay waqtigii la iska tuuri lahaa Flash oo laga dhigi lahaa il furan waxay sii ahaan doontaa mid sii noolaata weligeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Adobe waxay soo saartay codsi DMCA si meesha looga saaro Nalalka Nadiifka ah, oo ah mashruuc il furan oo sii waday taageerada Flash
Desktop -ka OnlyOffice 6.4 wuxuu la yimaadaa hagaajin loogu talagalay processor -ka ereyga iyo xaashiyaha
Squid 5.1 wuxuu yimaadaa kadib saddex sano oo horumar ah waana kuwan warkeeda